नबिल बैंकको नाफा रु. २ अर्ब माथि, खराब कर्जा घट्यो
काठमाण्डौ । नबिल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १.२७ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा १ अर्ब ८४...
ग्लोबल आइएमई बैंकको व्यापार आक्रामक, नाफा रु. २.३१ अर्ब, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीबीच पनि ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको बिजनेस आक्रामक देखिएको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म बैंकले २ अर्ब ३१ करोड नाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिसम्म बैंकले गरेको नाफा अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३७.३२ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब ६८...
जनर इन्स्योरेन्सको खुद बीमाशुल्क ३८.२७%ले बढ्यो, नाफा कति ?
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा खुद बीमाशुल्क आर्जन ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीको आइतबार प्रकाशित प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार यो बीमाशुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३८.२७ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले खुद बीमाशुल्कबापत ७ करोड ५ लाख...
काठमाण्डौ । मुलुकमा नेतृत्वदायी जीवन बीमा कम्पनीमध्येको एक प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुल बीमा शुल्क १ अर्ब ७ करोड ७४ लाख ८० हजार नाघेको छ। कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार यो बीमा शुल्क अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४०.७२ प्रतिशतले बढी हो।...
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीबीच पनि एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बिजनेसमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। संस्थाको शुक्रबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आर्जन गर्न सफल भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा भने संस्थाले खुद घाटा १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो। संस्थाको सञ्चालन मुनाफा...
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स : नाफा १०९.९२%ले बढ्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । आईपीओ निष्कासन गरी भर्खर धितोपत्र दोस्रो बजारमा प्रवेश गरेको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। कम्पनीको बिहीबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३.७६ प्रतिशतले बढी...
नेको इन्सुरेन्स : बीमाशुल्क आर्जन ३०.६३%ले बढ्यो, ईपीएस बढेर रु. ३७.७९ पुग्यो
काठमाण्डौ । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। कम्पनीको बिहीबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको बीमाशुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३०.६३ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले ३३ करोड १३ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन...
यस्तो छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रथम त्रैमासमा वित्तीय अवस्था
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकको शुक्रबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २६.४५ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। बैंकको...
सिद्धार्थ बैंकको नाफा रु. ५० करोड, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह बढ्यो
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकको शुक्रबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३.९८ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा ५२ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य...
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक लिमिटेडले ३३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकको शुक्रबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १.६९ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा ३४ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको...
लक्ष्मी बैंकको २२.२८%ले नाफा घट्यो, रिजर्भ १७.९०%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले ३१ करोड २३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकको शुक्रबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २२.२८ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा ४० करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य...
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा कृषि विकास बैंक लिमिटेडले ४६ करोड १४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकको शुक्रबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २२.९६ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य...
कोरोनाकालमा समेत नेपाल लाइफ चम्कियो, सबै सूचकमा प्रगति हुँदा कम्पनी झनै बलियो
काठमाण्डौ । देशकै नम्बर वान जीवन बिमा कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ८ अर्ब ९९ करोड बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ७ अर्ब ९२ करोड बिमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपाल लाइफले पहिलो त्रैमासमा बिमाशुल्क आर्जन १३.५० प्रतिशतले बढाएको देखिएको छ । यो कम्पनीले...